PVC WPC Door Board Extrusion Line - Mpanome tsipika fampidiran-tsolika ho an'ny vatan-tsolika China WPC Door, Factory –Jwell
Ny extruder an'ity tsipika extrusion ity dia ny extruder kambana kambana voaroaka SJZ92 namboarina, izay mandray ny refy mifehy ny mari-pana hafarana misy endri-javatra mifehy ny mari-pana avo lenta ary miasa mora sy azo antoka. Ny latabatra fanitsiana banga dia miaraka amin'ny fitaovana fanamafisam-peo matanjaka izay miantoka ny vokany mangatsiaka. Ny tarika haul dia miaraka amin'ny motera fampihenam-bidy marina sy inverter, izay manana ny tombony amin'ny firafitra mirindra, ny hery mahery vaika sy maharitra. Ny fanapahana dia manana ny vokany azo antoka sy marina. Ny stacker dia manana trolley mivezivezy ary arovana fiarovana manokana vita amin'ny fingotra mba hisorohana ny vokatra tsy ho voarangotra. Ny fampitaovana any ambanin'ity tsipika extrusion ity dia mampiasa ny solosaina azo adika na ny rafitra fanaraha-maso malaza eto an-toerana, hanamafisana ny milina azo antoka sy marin-toerana.